China Resistance Loop Exercise Band wholesale Ukwakha kanye nefektri | I-Tianzhihui
Ibhande lokumelana lenziwe ngezinto eziphezulu ze-TPE. Kunemibala emi-5 ehlukene kwiphakeji ngalinye, emele izikhundla ezahlukahlukene zesisindo. Imikhiqizo nayo ingamukela ukwakheka okuhlukahlukene kwemvelo.
Igama lomkhiqizo: I-TPE Resistance Band
Izinto Zomkhiqizo: I-TPE
Usayizi womkhiqizo: 600mm * 50mm
Umbala: Luhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okwesibhakabhaka, ophuzi, obomvu, omnyama
I-Resistance band inokuqina okuhle, futhi kulula ukuxhumanisa nokunyakaza kokuqeqeshwa kwe-yoga ukufeza ukubunjwa okungcono.
Ifanele abantu abasha nabesifazane abanamandla amancane, ingelula kahle futhi isebenzise yonke imisipha yomzimba, iqinise ukuma futhi ilawule ibanga lokwelula, ithuthukise ngempumelelo umsebenzi womzimba, futhi ilolonge ijika lomzimba elifanele. Kungumkhiqizo osizayo wokuzijwayeza i-yoga nama-Pilates. Kungakhuphula intshisekelo yokuzivocavoca futhi kushintshe isitayela sokuzivocavoca esisodwa.
Igama Ibhendi le-TPE Resistance
Ukupakisha Ukuphatha isikhwama / ibhokisi lombala elihle
Umbala Luhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okwesibhakabhaka, ophuzi, obomvu, omnyama
Kwenzelwe ikhasimende Nikeza ngokwezifiso i-LOGO
Indawo esebenzayo Imishini yokufaneleka, izitayela zezemidlalo, umzimba wokuqina
Usayizi 600mm * 50mm
Isethi ngayinye yemikhiqizo iqukethe amabhendi ama-5 wokumelana. Ihlukaniswe ngemibala emi-5, ngamunye umele isisindo esehlukile. Ngemininingwane, sicela ubheke etafuleni elilandelayo:
35- 40 amakhilogremu
Ikhwalithi ephezulu ye-TPE inokumelana okuqinile nokwaphuka
Imikhiqizo kungenziwa egcizelele ne logo
Ibhande lokumelana liyithuluzi elincane lokuqeqesha umzimba okulula ukuphatha, okulula ukulisebenzisa, futhi elisebenza kahle kakhulu. Ibizwa nangokuthi indandatho enwebeka. Eminyakeni engaphezu kwengu-100 eyedlule, kwakusetshenziswa amathuluzi wokuqeqesha amelana nokunwebeka kwebhande emkhakheni wokuqina.
Langaphambilini Isikhwama se-yoga esenziwe ngokwezifiso esingangenwa manzi
Olandelayo: I-B6-PLUS Ikhaya le-multifunctional Folding Treadmill
ukusebenza nama-band wokumelana
Isitolo esidayisa yonke impahla izinga okusezingeni ukhokho tpe yoga mat
iphazili yokuzivocavoca mat, Isikhwama seYoga Mat sokuhamba, I-Thick Flooring Puzzle Ukuzivocavoca Mat, Isikhwama Sokuhamba seYoga, I-Yoga Mat Enethawula Phezulu, Isikhwama se-Yoga Sling,